Bakhala ngezicelo zamaciko ezingahambisani nemigomo
UNGQONGQOSHE wemiDlalo, ubuCiko namaSiko uMnuz Nathi Mthethwa. Isithombe: GCIS
FANELESIBONGE BENGU | May 4, 2020
ININGI lamaciko elifake izicelo zokuxhaswa eMnyangweni wezemiDlalo, ubuCiko namaSiko kuzwelonke ngenxa yokuphazanyiswa yigciwane i-Corona, kuthiwa lithumele izicelo ezingahambiselani nemigomo nemibandela.
Lokhu kushiwo yilo mnyango oholwa uNgqongqoshe uMnuz Nathi Mthethwa esitatimendeni. UMthethwa uthe ngosuku lomnqamulajuqu u-Ephreli 6, izicelo abase bezitholile zazingu-6 000. Ngemuva kokuzibhekisisa zingu-5 000 obekungeze-COVID-19 Relief Fund.
“Ithimba labahluleli selibheke izicelo ezingu-1 000 kulezi ezingu-5 000. Kulezi ezingu-1 000, ezingu-105 ziphasisiwe futhi kulungiswa inkokhelo yazo,” kuchaza isitatimende.
Umnyango uthe ubheka izindlela zokusheshisa lolu hlelo kodwa ukhathazekile ngokuthi eziningi azihambisani nemigomo nemibandela njengokuthi abukho ubufakazi bokuthi imicimbi ihoxisiwe nokunye.
Ekhuluma nabezindaba ngoMsombulu uMthethwa okubakhazayo ngezicelo ezichithiwe ngukuthi zivela kubantu abahluphekayo.
"Sikhathazekile ngokungaphasi kwezicelo eziningi. Iningi lalezi zicelo zivela emphakathini yabantu abahluphekayo noma ababehlupheka ngokomlando. Abantu abaludinga ngempela lolu xhaso. Ngeshwa kodwa kumele silandele imigomo ebekiwe ngamaciko esikwazi ukuwaxhasa." usho kanje.
Kwenzeka lokhu nje, iqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) lifakele abaculi imali yokubalekelela ngalesi sikhathi.
Emyalezweni wakhe woSuku lweNkululeko, uMengameli weqembu uJulius Malema wamemezela ukuthi bazosiza bonke abaculi abake basebenzisana nabo.
Omunye umphathi womculi owake wacula engqungqutheleni yeqembu uthe imali ingenile ngoLwesihlanu.
“Abadlali kwi-EFF mfana. Bebebheka ama invoice abakuqasha ngawo bese beyiphinda kabili leyo mali,” kusho yena.
UNtando Duma ubhale kwiTwitter ukuthi uvuswe umyalezo wasebhange onemali eqhamuka eqenjini.
Umgcinimafa we-EFF kuzwelonke u-Omphile Maotwe ukuqinisekisile kuleli phephandaba ukuthi babafakelile abaculi imali.
UNTANDO Duma ungomunye wamaciko afakelwe yi-EFF imali Isithombe: INSTAGRAM
Unqabile ukuphawula ngokuthi bayiphinde kabili yini imali yabaculi noma bebebanikeza imali efanayo bonke.
“Asikhethi ukuthi uyilungu le-EFF noma cha kodwa uma nje uke wacula engqungqutheleni yethu besikuxhasa. Anginaso isibalo esiqondile kodwa baningi esibasizile,” kusho u-Omphile.